समाज | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
बेवकूफ शब्द को अर्थ? के तपाईं बेवकूफ हुनुहुन्छ?
बेवकूफ शब्दको अर्थ के हो? तीमि मुर्ख छौ? बेवकूफ (मानसिक मंदता, अशक्तता, कमजोरी) एक असाध्यै मानसिक रोग हो, सबैभन्दा गम्भिर पागलपन, सोच र बोलीको लगभग पूर्ण वा पूर्ण अनुपस्थितिको साथ गहिरो मानसिक मंदता। शब्द हुन्छ ...
के बल्गेरिया सिगरेटले अहिले बेच्न सक्छ? टाइप गर्नुहोस् Rodopi पुरानो सम्झना हो।
के बल्गेरियाली सिगरेटहरू अहिले बेचिन्छ? रोडोप प्रकार को छ जो पुरानो सम्झना छ। हो, यो सम्भव छ। sigopt.org - दुबै रोडोप र बीटी व्यापार गर्दैछन्, र भण्डारीले मात्र उनीहरूलाई धूम्रपान गरिरहेको असम्भव रोडोपी विक्री गरिरहेको छ 1995 मा पहिले नै ...
एलेना मालसिहाले आज कसरी सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्न सिकाउनुभयो। के यो सामान्य हो? भित्र हेर्नुहोस्
एलेना मालिशेवाले आज सार्वजनिक शौचालय कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सिकाइन्। यो सामान्य हो? सेमी भित्र मैले लामो समय अघि च्यानल स्विच गर्न सुरु गरें, किनकि मैले मलाखोभलाई देख्छु (मलाखभ + उसको पेशाब उपचारको साथ) मोजा सहितको यो केटा हाँस्दै फुस्के ...
र कुन राष्ट्रीयता फफत नामको व्यक्ति हुन सक्छ?
फरहत नामको व्यक्तिको देशको नाम के हो? टाटर मुसलम, उज्बेक, ताजिक, अजर्बाइजान। फरहाद (फरहत), पुरुष नाम, मूल - फारसी, नाम फरहादको अर्थ - "स्मार्ट", "सिकाउन योग्य"। यदि…
"पवित्र सरलता" को अभिव्यक्तिको अर्थ के हो?
"पवित्र सरलता" को अभिव्यक्तिको अर्थ के हो? र यति पनि। पौराणिक कथामा यो छ कि ज्यान हस, जसलाई जलाउनु पर्ने सजाय सुनाइएको थियो, कार्यान्वयनको ठाउँमा दाउराले छोपेको थियो, केही पुरानो क्रोनले आफैलाई चिनाएर त्यहाँ राख्यो र ...
तपाई गुस्सा वा रिस उठाउनुहुन्छ? मनपर्यो वा मनपर्छ? मजा छ वा मजा छ? काम वा काम?
रिस वा रिसाउन सही हिज्जे के हो? तपाईंलाई यो मनपर्‍यो वा मनपर्‍यो? केही रमाईलो गर्नुहोस् वा केही रमाईलो गर्नुहोस्? काम वा काम? सिक्नुहोस्, सिक्नुहोस्, सिक्नुहोस्! - V. I. लेनिन सिकाउँदछ सँधै प्रश्नको साथ वाक्यको प्रस context्गमा जाँच गर्नुहोस्। उदाहरण को रुपमा:…
मित्रको साथ तर्क गर्नुहोस्: शियोगुले सेनामा सेवा गरे?
एक मित्र संग तर्क: Shoigu सेना मा सेवा गर्नुभयो? उहाँ शिक्षाबाट सिभिल इन्जिनियर हुनुहुन्छ। १ 1993 90102 Until सम्म उहाँ रिजर्भ लेफ्टिनेन्ट थिए। स्वाभाविकै, उनले एक दिनको लागि सेनामा सेवा गरेनन्। http://www.pravda.info/kompromat/XNUMX.html नगर्नुहोस् ...
र किन पेट्रोल र ग्याँस नि: शुल्क तुर्कमेनिस्तानमा छ, र रूसको रूपमा अमेरिकामा उनीहरूले तिर्छन्?
किन तुर्कमेनिस्तानमा पेट्रोल र ग्यास नि: शुल्क छ, जबकि रूसमा उनीहरू अमेरिकामा जस्तै भुक्तान गर्छन्? तुर्कमेनिस्तानमा, पाटमुष्टको गरीबी तर मलाई लाग्दैन कि यो वास्तवमा साँच्चिकै हो किनकि ...
यहूदीहरूका विशिष्ट बाह्य विशेषताहरू।
यहूदीहरूको विशिष्ट बाहिरी सुविधाहरू। तिनीहरू फरक छन् - यूरोपियन र माउन्टेन यहूदीहरू। म उनीहरुलाई २ 25 बर्ष भन्दा बढी समयको लागि अध्ययन गर्दैछु)))) र कुनै निष्कर्षमा आएकी छैन))) तिनीहरू कालो छालामा हुन सक्छन् ...
Cossacks, युक्रेनियनहरु, "Ukrainians" को हेयरस्टाइल - टुफ्ट भएको कपाल टाउको, कपालको लक। के र किन यो देखा पर्‍यो?
Cossacks, युक्रेनियनहरु, "Ukrainians" को हेयरस्टाइल - टुफ्ट भएको कपाल टाउको, कपालको लक। के र किन यो देखा पर्‍यो? सफा सेभेटिएको टाउको र लामो फोरलक (उनलाई ओसिलेट्स पनि भनिन्थ्यो) विशेषताहरू थिए ...
राष्ट्रिय संवैधानिक के हो?
राष्ट्रिय मान्यता भनेको के हो? ht * tp: //w*ww.rus-sky.com/history/library/zertzalo.h*tm विशिष्टताको सूची, मलाई लाग्छ? राष्ट्रिय चेतना, यदि यो बियर, फुटबल र त्यस्तै केहि को लागी प्रेम छैन भने, फासीवाद मा परिवर्तन गर्न वा ...
दिमाग चैम्बरको के हो?
दिमाग कोठाको अर्थ के हो? एक मानिसको बारेमा उसको बौद्धिकताका लागि प्रख्यात र पनि - दिमागको वार्ड, र कुञ्जी हरायो। धेरै दिमाग, तर तपाईं यसलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न))))))))) दिमाग कोठा: मूर्खको काम गरेको मान्छेको विडंबना वर्णन।
यो कसले हो?
ठगहरू को हो? खैर, सामान्यतया, आफैंको लागि हेर्नुहोस् =))) यसमा आधारभूत रूपमा सबै कुरा सुरु हुन्छ =)))) लि link्क परियोजना प्रशासनको निर्णय द्वारा अवरुद्ध सम्बन्धित ब्ल्याट व्यक्तिको मुद्दामा अवरुद्ध गरिएको छ, चोरहरू अवलोकन गर्दै ...
"अफसोस" शब्दको मतलब के हो
"पश्चाताप" शब्दको अर्थ के हो? धेरै, धेरै दु: खी। deplorable = pichalko A वैज्ञानिक अर्थको अनुसार विशेषण विशेषण। दयनीय शोक, शोक, शोक # 9670 पैदा गर्दै; म बुझ्दछु कि अखबारहरूले पनि कलाको बारेमा लेख्छन्, तर ...
कथाको समीक्षा मेटेल ए.एस.सी. पुष्प तुरुन्तै
कथा मेटल ए.एस. को समीक्षा पुश्किन तुरुन्तै मलाई इन्टरनेटमा सहमत भएको खोजी गर्नुहोस् ठीक छ, राम्रो छ !!! धन्यवाद !! एक सुन्दर र अविश्वसनीय रोचक कथा कि त्यहाँ साँचो प्रेमको लागि कुनै बाधा छैन। ए.एस. पुश्किन ...
संक्षेपमा भन्नुहोस्। दर्शन, यसको स्थान र संस्कृतिको भूमिकाको विषय
संक्षिप्त बताउनुहोस्। दर्शनको विषय, यसको ठाउँ र संस्कृतिमा भूमिका दर्शनशास्त्र संसारको एक सामान्य सिद्धान्त हो र यसमा मानिस। दर्शन र विश्व दृश्य जैविक रूपमा एक अर्कासँग जोडिएका छन्। Worldview ...
कूल र कसले "शोचर्सको बारेमा गीत" सम्झना गर्छन्?
कूल र कसले "शोचर्सको बारेमा गीत" सम्झना गर्छन्? सेचर्सले लडाकुहरूलाई टोलाउन पठाए, दूरबीनलाई उसको आँखामा उठाए, देख्यो, चकित भए र, नरोकेसम्म, भुइँमा लडियो ... रक्तस्राव स्कार्लेट रगत, उनले ...
केटा कलबिच जो यो मित्र हो
केटा किबालचीश जो यिनी हुन् यो दयालु केटा हो। जसले सबैलाई मद्दत पुर्‍यायो र न्यायको लागि लडे। "प्लेनहरु उडिरहेका छन्, हेलो केटा! स्टीमरहरू जहाज गरिरहेका छन् - हेलो केटा! "सहि अग्रगामी !! ! सबै मान्छे को लागी एक उदाहरण !!! यो हो…
किन सबै मानिसहरूसँग विभिन्न नेभिगेसन छन्?
किन सबै व्यक्तिको बिभिन्न नाभिहरू हुन्छन्? मानवजातिको उत्तम दिमागहरू यस प्रश्नको बारेमा संघर्ष गरिरहेका छन्। गर्भनाल विभिन्न तरिकामा काटिएको थियो। किनभने ... मसँग नाभी छैन। म तपाईं सबै धेरै ईर्ष्या! सुँडेनीहरू ...
I'm 3443 लाई एसएमएस पठाउनुहोस् "म एक दुब्लाउने मान्छे होइन!" र जति तपाईले पठाउने एसएमएस गर्नुहुन्छ, तपाई त्यति धेरै चुकर हुनुहुन्न! एसएमएस लागत - २.2,9 $।
I'm 3443 लाई एसएमएस पठाउनुहोस् "म एक मालाको नाली हुँ!", र तपाईले जति धेरै एसएमएस पठाउनुहुन्छ, त्यति नै तपाई मसिन होइन! एक एसएमएस को लागत $ २.2,9 छ। सुपर! aftar zhzhot!))))) राम्रो भयो! साइटमा गए ...
82 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 1,699 प्रश्नहरू।